အရောငျးသမားကောငျးမြားဖွဈစဖေို့ သိထားသငျ့တဲ့ နိယာမ (၆)ခကျြ
စီးပှားရေးလုပျငနျး အားလုံးမှာ ‘Sales’ ဟာ အရေးကွီးတဲ့ အခနျးဏ်ဍတဈခုပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ ကုမ်ပဏီမှာ အရောငျးသမားကောငျးကောငျးတှရှေိဖို့ လုပျငနျးရှငျတှကေ မြှျောလငျ့တတျကွပါတယျ။ ကိုယျကိုတိုငျက Sales ပိုငျးကို စိတျမဝငျစားရငျတောငျ Interview တှေ ဖွတေဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကို ဘယျလို ရောငျးရမလဲ (တဈနညျး) ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ အရညျအသှေးတှကေို ဘယျလိုနညျးနဲ့ အကောငျးဆုံး ထုတျပွနိုငျမလဲ ဆိုတာကို သိထားဖို့လိုပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ Sales and Marketing နယျပယျကလူတှရေောတခွားနယျပယျကလူတှပေါ သိရှိထားသငျ့တဲ့ နိယာမ (၆)ခကျြကို အတူတူ လလေ့ာကွရအောငျ။
(၁) အပွနျအလှနျ အပေးအယူနိယာမ( Principle of Reciprocity)
(၂) ရှားပါးနိယာမ( Principle of Scarcity)
(၃) အထောကျအခံ နိယာမ( Principle of Authority )
(၄) ကတိကဝတျနိယာမ( Principle of Consistency )
(၅) နှဈသကျခွငျးနိယာမ ( Principle of Liking )
(၆) ထပျတူနိယာမ( Principle of Consensus ) တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ကဲ တဈခုခငျြးဆီကို အသေးစိတျ ဆကျပွီးလလေ့ာကွရအောငျ။
အပွနျအလှနျ အပေးအယူနိယာမ( Principle of Reciprocity)
ဒီနိယာမက အရောငျးသမား အတျောမြားမြား အသုံးမြားပွီး ထိရောကျတဲ့အခကျြတဈခုပါ။ အပေးအယူသဘောကို အခွခေံထားတဲ့ အရောငျးနိယာမပဲဖွဈပါတယျ။ လူတဈဦးကို ပစ်စညျးတဈခုခု ရောငျးတော့မယျဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ရောငျးခငျြတဲ့ဆန်ဒကို ရှတေ့နျးတငျလို့မရပါဘူး။ ကိုယျက သူ့ကိုအရငျဆုံး တဈခုခုပေးဖို့က အရေးအကွီးဆုံးပါ။
သတိပွုရမယျ့အခကျြတဈခုက မိမိ service ကို သှားရောငျးတဲ့ ကုမ်ပဏီရဲ့အကွောငျး၊ လူတှရေဲ့အကွောငျးကို သသေခြောခြာ လလေ့ာထားမယျ၊ ကိုယျ့ကို သူတို့ဆီက ပိုကျဆံကို ရယူဖို့သပျသပျ လာတဲ့သူမဟုတျဘူး၊ သူတို့ရဲ့လုပျငနျး တဈစိတျတဈဒသေ အောငျမွငျဖို့ရာ အထောကျအကူပွုမယျ့သူတဈယောကျဆိုတာကို သူတို့လကျခံလာအောငျ ပွောဆိုနိုငျရပါမယျ။ ဒီလိုဆိုရငျတော့ အောငျမွငျတဲ့အရောငျးသမားတဈဦး ဖွဈလာမှာပါ။
ဥပမာ စားသောကျဆိုငျတဈခုမှာ ကိုယျက အစားအစာကို မှာစားနတေယျဆိုပါဆို့။ စားသောကျဆိုငျက ဧညျ့သညျကို Extra Services အနနေဲ့ အခြိုရညျလေးတဈခှကျပေးတယျဆိုတာက သူတို့အတှကျ ဝနျမပိုစသေလို စားသောကျဆိုငျမှာလာစားတဲ့ Customer တှကေိုလညျး အမွဲအမှတျတရ ဖွဈနစေမှောပါ။ ဒါဟာ စားသုံးသူတှကေို အမွဲတမျး စားသုံးသူအဖွဈ ဆှဲဆောငျလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။
ရှားပါးနိယာမ( Principle of Scarcity)
လူတိုငျးက ရှားပါးတဲ့အရာတှကေို နှဈသကျကွပါတယျ။ အဲ့တာကွောငျ့ ခုနောကျပိုငျးဆို Limited ဆိုတဲ့ဝေါဟာရပျေါလာရခွငျးဖွဈပါတယျ။ အရအေတှကျအကနျ့အသတျနဲ့ထုတျတဲ့ပစ်စညျးတှေ ဆို ပိုပွီးလိုခငျြကွပါတယျ။
ဥပမာ- ဆိုငျတဈဆိုငျမှာ “ Channel ရမှေေး ကို 30% off နဲ့ရောငျးပေးနပေါတယျ။ အခု ၂ ပုလငျးပဲကနျြပါတော့တယျ” လို့သာကွျောငွာလိုကျပါ။ သခြောပါတယျ။ အဲ့ ရမှေေး ၂ ပုလငျးက ခဏအတှငျးမှာ ရောငျးထှကျသှားမှာပါ။ ဒါကတော့ ဆိုငျပိုငျရှငျက ရှားပါးနိယာမ ကိုအသုံးပွုပွီးရောငျးခသြှားတာဖွဈပါတယျ။
အထောကျအခံ နိယာမ( Principle of Authority )
ဒါကတော့ ယနခေ့တျေကုနျပစ်စညျးတျောတျောမြားမြား အရောငျးဖောကျတဲ့အခါ အသုံးပွုတဲ့နိယာမပါ။ အထောကျအခံနိယာမ ဆိုတဲ့အတိုငျး ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိတဲ့ လူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးတဈယောကျဆီက အထောကျအခံကောငျး ကို ရရှိအောငျလုပျတာဖွဈပါတယျ။ Review ပေးတဲ့သဘောပေါ့။ ဒီနိယာမ ကလညျး တျောတျောလေးပေါကျရောကျတာကိုအားလုံးသတိထားမိကွမှာပါ။
မိမိအလေးထားရတဲ့ သူတဈဦးဦးက ဒီကုနျပစ်စညျးကိုကောငျးတယျ၊ ကွိုကျတယျ / ဒါမှမဟုတျ ဒီကုမ်ပဏီက ယုံကွညျရတယျ၊ အလုပျလုပျရတာအဆငျပွတေယျ . . . အစရှိတဲ့ ထောကျခံခကျြမြိုးကို ရရှိထားတဲ့ကုနျပစ်စညျး၊ ကုမ်ပဏီတှကေို ပိုမိုယုံကွညျသုံးစှဲလာကွတာတှကေ ရှောငျလှဲမရတဲ့ Authority နိယာမပါ။
ကတိကဝတျနိယာမ( Principle of Consistency )
ဒါကတော့ ရောငျးသူဝယျသူအကွား ထားရှိတဲ့ ကတိကဝတျကို အခွခေံထားတဲ့ နိယာမပဲဖွဈပါတယျ။ ဝယျသူအပျေါမှာ ရိုးသားပါ။ ပေးထားတဲ့ကတိအတိုငျး ဝနျဆောငျမှု၊ အရညျအသှေးပွညျ့မှီတဲ့ Services ပေးပါ။ မိမိရဲ့ ကုနျပစ်စညျးပျေါ အခြိနျယူသုံးဆှဲပေးကွတဲ့ မိမိရဲ့ Customer မြားကို အမွဲအမှတျတရ ရှိနပေါစေ။
ဥပမာဆိုပါစို့။ မိမိရဲ့ Services ကို ဝယျယူတဲ့ Customer တှကေို ဘယျနဘေ့ယျအခြိနျမှာတော့ ဘယျလိုအရညျအသှေေးရှိတဲ့ Services ကို အရောကျပို့ပေးပါ့မယျလို့ ကတိပွုထားခဲ့တယျဆိုရငျ ဒီကတိကို တညျအောငျ ကွိုးစားပါ။ အကွောငျးအရငျးတဈခုခုကွောငျ့ ကတိမတညျနိုငျခဲ့ဘူးဆိုရငျလညျး ကိုယျပေးထားတဲ့ကတိအပျေါမှာ တာဝနျယူမှုရှိပါစေ။ ဒီလိုနညျးနဲ့ မိမိက ကတိတညျတဲ့သူဖွဈကွောငျး customer မြား အမွဲ အမှတျတရ ရှိနပေါစေ။
နှဈသကျခွငျးနိယာမ ( Principle of Liking )
ဒါကတော့ ရှငျးပါတယျ။ ဝယျသူနှဈသကျအောငျပွုမူရတဲ့ နိယာမပေါ့။ တဈခါတဈရံမှာ ဝယျသူတှကေ ဝယျနကေပြစ်စညျးတဈခုပဲ ဒါပမေယျ့ တခွားဆိုငျကမဝယျခငျြဘူး။ ဒီဆိုငျကပဲဝယျခငျြတယျ ဆိုတာမြိုးဖွဈအောငျလုပျရမယျ့ နိယာမပါ။ ဒါကတော့အားလုံးသိတဲ့ ငယျငယျက အမကေ ကုနျစုံဆိုငျမှာ ကွကျသှနျသှားဝယျခိုငျးရငျတောငျ “ဟဲ့ ဒျေါပုမ ဆီကပဲ ဝယျနျော” လို့ တဈစုံတဈယောကျစီကပဲ ဝယျခိုငျးတာကို ကွုံဖူးကွမှာပါ။ ဒါက ဝယျသူနှဈသကျခွငျးဖွဈအောငျ ရောငျးပေးလို့ ဝယျသူက သူမှသူဖွဈနတောပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး အရောငျးသမားတှရေဲ့ ပနျးတိုငျ က ဘယျလောကျရောငျးရလဲ ဆိုတာထကျ ဝယျသူဘယျလောကျစိတျခမျြးသာသှားသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့တာကအရေးကွီးဆုံးပါပဲ။
ထပျတူနိယာမ( Principle of Consensus )
အလှပွငျပစ်စညျးရောငျးတဲ့ဆိုငျတဈဆိုငျ ကို သှားတယျဆိုပါစို့။ ကိုယျက ဝယျခငျြသလို မဝယျခငျြသလိုတှဝေနေတေဲ့အခြိနျမှာ ကောငျတာက အမကွီးက “ညီမလေးတို့ အသကျအရှယျတှဆေို ဒါလေး သိပျသုံးကွတာ။ ညီမလေးလို အသားအရသေမားတှအေကွိုကျပဲ။ အဲ့တာလေးကောငျးတယျ ညီမလေး။ ယူသှား” ဆိုပွီး ပွောတာကိုကွုံဖူးပါသလား။ ကိုယျက နဂိုတညျးက ဝယျခငျြခငျြဖွဈနတော။ အဲ့မှာ အရောငျးဝနျထမျးက တခွားလူတှလေညျးသုံးတယျ၊သုံးပါ လညျးပွောလိုကျရော ခကျြခငျြးဆုံးဖွတျခကျြတှပွေတျသားသှားပွီးကောကျဝယျလိုကျရော။ သူမြားဝယျ လိုကျဝယျ၊ သူမြားသုံး လိုကျသုံးခငျြတဲ့ လူတှရေဲ့ အခွခေံစိတျလေးကို ခြုပျကိုငျပွီးရောငျးတဲ့အရောငျးနညျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီ အခကျြ(၆)ခကျြ က လကျတှမှေ့ာ အရောငျးသမားတိုငျး လကျကိုငျထားတဲ့နိယာမလေးတှဖွေဈပါတယျ။ သငျက အောငျမွငျတဲ့အရောငျးသမားတဈယောကျဖွဈခငျြရငျတော့ ဒီနိယာမလေးတှကေို သခြောလကေ့ငျြ့ဖို့လိုမယျနျော။ အရောငျးသမားမဟုတျတဲ့သူတှအေဖို့လညျး ဒီနိယာမတှကေ သိထားရငျ အကြိုးရှိတာဖွဈတာကွောငျ့ အားလုံးအတှကျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
အရောင်းသမားကောင်းများဖြစ်စေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ နိယာမ (၆)ချက်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အားလုံးမှာ ‘Sales’ ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းဏ္ဍတစ်ခုပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အရောင်းသမားကောင်းကောင်းတွေရှိဖို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်က Sales ပိုင်းကို စိတ်မဝင်စားရင်တောင် Interview တွေ ဖြေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လို ရောင်းရမလဲ (တစ်နည်း) ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရည်အသွေးတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ထုတ်ပြနိုင်မလဲ ဆိုတာကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Sales and Marketing နယ်ပယ်ကလူတွေရောတခြားနယ်ပယ်ကလူတွေပါ သိရှိထားသင့်တဲ့ နိယာမ (၆)ချက်ကို အတူတူ လေ့လာကြရအောင်။
(၁) အပြန်အလှန် အပေးအယူနိယာမ( Principle of Reciprocity)
(၂) ရှားပါးနိယာမ( Principle of Scarcity)
(၃) အထောက်အခံ နိယာမ( Principle of Authority )
(၄) ကတိကဝတ်နိယာမ( Principle of Consistency )
(၅) နှစ်သက်ခြင်းနိယာမ ( Principle of Liking )
(၆) ထပ်တူနိယာမ( Principle of Consensus ) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ တစ်ခုချင်းဆီကို အသေးစိတ် ဆက်ပြီးလေ့လာကြရအောင်။
အပြန်အလှန် အပေးအယူနိယာမ( Principle of Reciprocity)
ဒီနိယာမက အရောင်းသမား အတော်များများ အသုံးများပြီး ထိရောက်တဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ အပေးအယူသဘောကို အခြေခံထားတဲ့ အရောင်းနိယာမပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးကို ပစ္စည်းတစ်ခုခု ရောင်းတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းချင်တဲ့ဆန္ဒကို ရှေ့တန်းတင်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ်က သူ့ကိုအရင်ဆုံး တစ်ခုခုပေးဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါ။
သတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ခုက မိမိ service ကို သွားရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်း၊ လူတွေရဲ့အကြောင်းကို သေသချောချာ လေ့လာထားမယ်၊ ကိုယ့်ကို သူတို့ဆီက ပိုက်ဆံကို ရယူဖို့သပ်သပ် လာတဲ့သူမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အောင်မြင်ဖို့ရာ အထောက်အကူပြုမယ့်သူတစ်ယောက်ဆိုတာကို သူတို့လက်ခံလာအောင် ပြောဆိုနိုင်ရပါမယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့အရောင်းသမားတစ်ဦး ဖြစ်လာမှာပါ။
ဥပမာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ကိုယ်က အစားအစာကို မှာစားနေတယ်ဆိုပါဆို့။ စားသောက်ဆိုင်က ဧည့်သည်ကို Extra Services အနနေဲ့ အချိုရည်လေးတစ်ခွက်ပေးတယ်ဆိုတာက သူတို့အတွက် ဝန်မပိုစေသလို စားသောက်ဆိုင်မှာလာစားတဲ့ Customer တွေကိုလည်း အမြဲအမှတ်တရ ဖြစ်နေစေမှာပါ။ ဒါဟာ စားသုံးသူတွေကို အမြဲတမ်း စားသုံးသူအဖြစ် ဆွဲဆောင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရှားပါးနိယာမ( Principle of Scarcity)
လူတိုင်းက ရှားပါးတဲ့အရာတွေကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ခုနောက်ပိုင်းဆို Limited ဆိုတဲ့ဝေါဟာရပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက်အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ဆို ပိုပြီးလိုချင်ကြပါတယ်။
ဥပမာ- ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ “ Channel ရေမွှေး ကို 30% off နဲ့ရောင်းပေးနေပါတယ်။ အခု ၂ ပုလင်းပဲကျန်ပါတော့တယ်” လို့သာကြော်ငြာလိုက်ပါ။ သေချာပါတယ်။ အဲ့ ရေမွှေး ၂ ပုလင်းက ခဏအတွင်းမှာ ရောင်းထွက်သွားမှာပါ။ ဒါကတော့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ရှားပါးနိယာမ ကိုအသုံးပြုပြီးရောင်းချသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
အထောက်အခံ နိယာမ( Principle of Authority )
ဒါကတော့ ယနေ့ခေတ်ကုန်ပစ္စည်းတော်တော်များများ အရောင်းဖောက်တဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့နိယာမပါ။ အထောက်အခံနိယာမ ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီက အထောက်အခံကောင်း ကို ရရှိအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Review ပေးတဲ့သဘောပေါ့။ ဒီနိယာမ ကလည်း တော်တော်လေးပေါက်ရောက်တာကိုအားလုံးသတိထားမိကြမှာပါ။
မိမိအလေးထားရတဲ့ သူတစ်ဦးဦးက ဒီကုန်ပစ္စည်းကိုကောင်းတယ်၊ ကြိုက်တယ် / ဒါမှမဟုတ် ဒီကုမ္ပဏီက ယုံကြည်ရတယ်၊ အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေတယ် . . . အစရှိတဲ့ ထောက်ခံချက်မျိုးကို ရရှိထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်း၊ ကုမ္ပဏီတွေကို ပိုမိုယုံကြည်သုံးစွဲလာကြတာတွေက ရှောင်လွှဲမရတဲ့ Authority နိယာမပါ။
ကတိကဝတ်နိယာမ( Principle of Consistency )
ဒါကတော့ ရောင်းသူဝယ်သူအကြား ထားရှိတဲ့ ကတိကဝတ်ကို အခြေခံထားတဲ့ နိယာမပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်သူအပေါ်မှာ ရိုးသားပါ။ ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်း ဝန်ဆောင်မှု၊ အရည်အသွေးပြည့်မှီတဲ့ Services ပေးပါ။ မိမိရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းပေါ် အချိန်ယူသုံးဆွဲပေးကြတဲ့ မိမိရဲ့ Customer များကို အမြဲအမှတ်တရ ရှိနေပါစေ။
ဥပမာဆိုပါစို့။ မိမိရဲ့ Services ကို ဝယ်ယူတဲ့ Customer တွေကို ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုအရည်အသွေေးရှိတဲ့ Services ကို အရောက်ပို့ပေးပါ့မယ်လို့ ကတိပြုထားခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒီကတိကို တည်အောင် ကြိုးစားပါ။ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကတိမတည်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ်ပေးထားတဲ့ကတိအပေါ်မှာ တာဝန်ယူမှုရှိပါစေ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ မိမိက ကတိတည်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်း customer များ အမြဲ အမှတ်တရ ရှိနေပါစေ။
နှစ်သက်ခြင်းနိယာမ ( Principle of Liking )
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဝယ်သူနှစ်သက်အောင်ပြုမူရတဲ့ နိယာမပေါ့။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဝယ်သူတွေက ဝယ်နေကျပစ္စည်းတစ်ခုပဲ ဒါပေမယ့် တခြားဆိုင်ကမဝယ်ချင်ဘူး။ ဒီဆိုင်ကပဲဝယ်ချင်တယ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ့် နိယာမပါ။ ဒါကတော့အားလုံးသိတဲ့ ငယ်ငယ်က အမေက ကုန်စုံဆိုင်မှာ ကြက်သွန်သွားဝယ်ခိုင်းရင်တောင် “ဟဲ့ ဒေါ်ပုမ ဆီကပဲ ဝယ်နော်” လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်စီကပဲ ဝယ်ခိုင်းတာကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါက ဝယ်သူနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်အောင် ရောင်းပေးလို့ ဝယ်သူက သူမှသူဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အရောင်းသမားတွေရဲ့ ပန်းတိုင် က ဘယ်လောက်ရောင်းရလဲ ဆိုတာထက် ဝယ်သူဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာသွားသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့တာကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။
ထပ်တူနိယာမ( Principle of Consensus )
အလှပြင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင် ကို သွားတယ်ဆိုပါစို့။ ကိုယ်က ဝယ်ချင်သလို မဝယ်ချင်သလိုတွေဝေနေတဲ့အချိန်မှာ ကောင်တာက အမကြီးက “ညီမလေးတို့ အသက်အရွယ်တွေဆို ဒါလေး သိပ်သုံးကြတာ။ ညီမလေးလို အသားအရေသမားတွေအကြိုက်ပဲ။ အဲ့တာလေးကောင်းတယ် ညီမလေး။ ယူသွား” ဆိုပြီး ပြောတာကိုကြုံဖူးပါသလား။ ကိုယ်က နဂိုတည်းက ဝယ်ချင်ချင်ဖြစ်နေတာ။ အဲ့မှာ အရောင်းဝန်ထမ်းက တခြားလူတွေလည်းသုံးတယ်၊သုံးပါ လည်းပြောလိုက်ရော ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြတ်သားသွားပြီးကောက်ဝယ်လိုက်ရော။ သူများဝယ် လိုက်ဝယ်၊ သူများသုံး လိုက်သုံးချင်တဲ့ လူတွေရဲ့ အခြေခံစိတ်လေးကို ချုပ်ကိုင်ပြီးရောင်းတဲ့အရောင်းနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ အချက်(၆)ချက် က လက်တွေ့မှာ အရောင်းသမားတိုင်း လက်ကိုင်ထားတဲ့နိယာမလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်က အောင်မြင်တဲ့အရောင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ဒီနိယာမလေးတွေကို သေချာလေ့ကျင့်ဖို့လိုမယ်နော်။ အရောင်းသမားမဟုတ်တဲ့သူတွေအဖို့လည်း ဒီနိယာမတွေက သိထားရင် အကျိုးရှိတာဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Read times Last modified on Tuesday, 08 December 2020 14:43